Kolontsaina orinasa | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Ny kolontsaina orinasa dia ny finiavanay, ny hetahetantsika ary ny tadiavintsika. Mampiseho ny toe-tsaintsika tsy manam-paharoa sy tsara io. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny lafiny iray manan-danja amin'ny fampiroboroboana ny fifaninanana fototra orinasa, dia afaka manatsara ny firaisan'ny ekipa ary mandrisika ny fahaizan'ny mpiasa.
Ny mpiasa rehetra, ao anatin'izany ny mpitantana orinasa, no harena sarobidy indrindra amin'ny orinasanay. Ny asa mafy ataon'izy ireo sy ny ezak'izy ireo no mahatonga an'i Shuangyang ho orinasa iray amin'io refy io. Any Shuangyang, tsy mila mpitondra miavaka fotsiny isika fa mila talenta maharitra sy miasa mafy izay afaka mamorona tombony sy soatoavina ho antsika ary manolo-tena hiara-hientana amintsika. Ny mpitantana amin'ny ambaratonga rehetra dia tokony ho scout talenta hatrany hanangonana mpiasa mahay kokoa. Mila talenta be zotom-po sy be zotom-po ary miasa mafy isika mba hiantohana ny fahombiazantsika amin'ny ho avy. Noho izany dia tokony hanampy ny mpiasa manana fahaizana sy fahamendrehana isika hahita ny toerana sahaza azy ary hitrandraka ny fahaizany.
Mamporisika hatrany ny mpiasa izahay hitia ny ankohonany sy ho tia ny orinasa, ary hanatanteraka izany amin'ny zavatra kely. Manolo-kevitra izahay fa ny asa anio dia tokony hatao anio, ary ny mpiasa dia tokony hiasa am-pahombiazana hahatratra ny tanjon'izy ireo isan'andro mba hahatratrarana ny valim-pifidianana na ho an'ny mpiasa na ho an'ny orinasa.
Nametraka rafi-piaraha-miasa ho an'ny mpiasa izahay hikarakara ny mpiasa tsirairay sy ny fianakaviany mba hahafahan'ny fianakaviana rehetra manohana anay.
Ny fahamarinana sy ny fahatokisana no politika tsara indrindra. Nandritra ny taona maro, ny "tsy fivadihana" dia iray amin'ireo fitsipika fototra ao Shuangyang. Miasa amin'ny fahamendrehana izahay mba hahazoantsika ny fizarana tsena amin'ny "fahamendrehana" ary handresy ireo mpanjifa "krédibilité". Mitazona ny tsy fivadihanay izahay rehefa mifampiraharaha amin'ny mpanjifa, ny fiaraha-monina, ny governemanta ary ny mpiasa, ary io fomba io dia nanjary fananana tsy azo zahana ao Shuangyang.
Ny tsy fivadihana dia fotokevitra ifotony isan'andro, ary ny natiora dia miankina amin'ny andraikitra. Ao Shuangyang, heverinay ho toy ny fiainan'ny orinasa ny kalitao, ary raisinay fomba fanao mifototra amin'ny kalitao. Nandritra ny folo taona mahery, ny mpiasanay maharitra, mazoto ary manolo-tena dia nampihatra ny "tsy fivadihana" miaraka amin'ny fahatsapana andraikitra sy iraka. Ary ny orinasa dia nahazo ny anaram-boninahitra toa ny "Enterprise of Integrity" sy ny "Exclusive Enterprise of Integrity" natolotry ny biraon'ny faritany imbetsaka.
Manantena ny hametraka rafitra fiaraha-miasa azo itokisana izahay ary hahatratrarana tarehin-javatra mandresy miaraka amin'ireo mpiara-miasa izay mino ny fahamendrehana ihany koa.
Ao Shuangyang, ny fanavaozana no antony manosika ny fampandrosoana, ary koa fomba iray fanatsarana ny fifaninanana fototra eo amin'ny orinasa.
Miezaka foana izahay mamorona tontolo mamorona malaza, manangana rafitra manavao, mamboly eritreritra vaovao ary mamporisika ny hafanam-po vaovao. Miezaka manatsara ny atiny vaovao izahay satria manavao ny vokatra hamaly ny fitakian'ny tsena ary novaina haingana ny fitantanana hitondra tombony ho an'ny mpanjifantsika sy ny orinasa. Entanina ny mpiasa rehetra handray anjara amin'ny fanavaozana. Ny mpitondra sy ny mpitantana dia tokony hiezaka ny hanavao ny fomba fitantanana orinasa, ary ny mpiasa ankapobeny dia tokony hitondra fanovana amin'ny asany manokana. Ny fanavaozana no tokony ho teny filamatra ho an'ny tsirairay. Miezaka koa izahay manitatra fantsom-baovao. Ny rafitra fifandraisana anatiny dia nohatsaraina mba hampiroboroboana ny fifandraisana mahomby mba hanomezana aingam-panahy ny fanavaozana. Ary ny fanangonana fahalalana dia manatsara amin'ny alàlan'ny fandalinana sy ny fifandraisana mba hanatsarana ny fahaizan'ny fanavaozana.
Miova hatrany ny raharaha. Amin'ny ho avy, Shuangyang dia hampihatra sy hifehy ny fanavaozana amin'ny lafiny telo, dia ny paikadin'ny orinasa, ny rafitra fandaminana ary ny fitantanana isan'andro, mba hampiroboroboana "atmosfera" ankafizin'ny fanavaozana sy hikolokoloana "fanahin'ny fanavaozana" mandrakizay.
Milaza ilay ohabolana fa "raha tsy miankina amin'ny dia kely sy tsy dia fahita firy, kilometatra an'arivony maro no tsy tratra." Noho izany, mba hahatsapantsika ny fanolorantenantsika tena hahomby dia tokony hitondra fanavaozana amin'ny fomba madiodio isika, ary hifikitra amin'ilay hevitra hoe "ny vokatra dia mampiavaka ny orinasa iray, ary ny manintona mampiavaka ny olona iray".
Ny hoe mikatsaka ny hatsarana dia midika fa tokony hametraka benchmarks isika. Ary mbola lavitra ny lalana mbola tokony halehantsika mba hahatsapana ny fahitana ny "miavonavona miteraka zom-pirenena sinoa". Mikendry ny hanangana marika orthopedika nasionaly tsara indrindra sy tsy manam-paharoa izahay. Ary mandritra ny am-polony taona ho avy, hohamaivaninay ireo elanelana misy amin'ireo marika iraisam-pirenena ary hiezaka hanatratra izany avy hatrany.
Ny dia an'arivony kilometatra dia manomboka amin'ny dingana iray. Manaraka ny sandan'ny "orientation des personnes", dia hanangona ekipa mpiasa malina, maharitra, azo ampiharina sy matihanina isika hianatra am-pahazotoana, hanavao ny fahasahiany ary hanao fandraisana anjara mavitrika. Hifantoka amin'ny kalitao sy hitazomana ny tsy fivadihana isika rehefa miezaka ny hisongadinan'ny tsirairay sy ny orinasa hanatanteraka ny nofinofy lehibe hahatonga an'i Shuangyang ho marika nasionaly malaza.